Andorra - A ije site na ya kasị akara ebe | Njem zuru oke
Andorra bụ obere steeti nọọrọ onwe ya dị na mpaghara ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Europe, na mpaghara Pyrenees dị n’agbata Spain na France. Isi obodo ya bụ Andorra La Vieja, nke dị ihe karịrị kilomita 1000. Ma mma ya na-adọrọ onye njem ọ bụla na-asọpụrụ onwe ya. Historiclọ ọrụ akụkọ ihe mere eme ya, nke nwere ụlọ site na narị afọ nke XNUMX, bụ otu n'ime nkwụsị nkwụsị.
N'otu ụzọ ahụ niile ụka Romanesque anyị ga-achọta n'oge ọ bụla, ebe Andorra nwere ihe dịka iri anọ ma ọ bụ ụfọdụ karịa. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu malitere n'etiti narị afọ nke 40 na XNUMX. Offọdụ ndị bụ isi bụ Santa Coloma ma ọ bụ Sant Climent de Pal na San Martí de la Cortinada, tinyere ndị ọzọ.
Mpaghara ugwu na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ gburugburu zuru oke. N'ime ya, ị nwere ike ịchọpụta ọtụtụ obodo zoro ezo dịka Pal, Le Bons ma ọ bụ Ordino, nke a na-ahụta dị ka etiti ọdịbendị nke mpaghara ahụ, ebe ọ nwere ọtụtụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie. N'aka nke ọzọ, ka gị na ndị ezinụlọ gị nwee obi ụtọ, ọ nweghị ihe dịka Naturlandia, ebe ị nwere ike ịga ogige ntụrụndụ ya nke na-ejukarị ihe omume ndị dị n'èzí anya.
N'ikwu okwu banyere nke a, ị gaghị echefu Lakes nke Tristaina. ngụkọta nke ọdọ mmiri atọ na-etolite ala dị ịtụnanya ma nwee oke okike. Andorra bụ ihe niile na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-akwadebe njem na-eche ihe ị ga-ahụ na Andorra, anyị nwere azịza kachasị mma….
Mgbe ngwụsị nke oge ọkọchị gasịrị, ọ bụ oge iji chee echiche banyere njem anyị ọzọ. N'ihi ya, n'etiti ọtụtụ ụdị ...